uBlock, adBlock Plus | နှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည် Linux မှ
uBlock, adBlock Plus အားအခမဲ့နှင့်စူပါပေါ့ပါးသောရွေးချယ်စရာ
အလက်ဇန်းဒါး (ခေါ် KZKG ^ ဂါရာ) | | applications များ, အကြံပြုပါသည်
1 uBlock ဆိုတာဘာလဲ
2 UBlock စွမ်းဆောင်ရည်
3 UBlock တပ်ဆင်ခြင်း
uBlock ၎င်းသည်ကြော်ငြာပိတ်ဆို့ခြင်းမျှသာမဟုတ်ပါ၊ ကယေဘုယျရည်ရွယ်ချက် blocker ဖြစ်ပါတယ်။ Adblock Plus filter syntax ကိုထောက်ပံ့ပေးသကဲ့သို့ ads သည် block လုပ်သည်။ သို့သော် syntax ကိုတိုးချဲ့ပြီး custom filters နှင့် rules များနှင့်အလုပ်လုပ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းတီထွင်သူများ၏အဆိုအရ၎င်းသည်အလွန်ပေါ့ပါးသော CPU နှင့် memory footprint ကိုချန်ထားခဲ့သော်လည်း၎င်းသည် AdBlock Plus (ABP) သို့မဟုတ် Ghostery ကဲ့သို့သောလူကြိုက်များ blockers များအသုံးပြုသောထောင်ပေါင်းများစွာသော filter များကို load and enforce လုပ်နိုင်သည်။ ဤစာရင်းများတွင် EasyList၊ EasyPrivacy, Malware Domains များနှင့် tracker များ၊ လူမှုရေးဝစ်ဂျက်များနှင့်အခြားအရာများကိုပိတ်ဆို့ရန်ခွင့်ပြုထားသောအခြားသူများပါဝင်သည်။ ၎င်းသည် hosts file မ်ားကို support ပြုလုပ်ပြီး "factory from" မှလာသည့်အခြားအရာများမှအခြားအရင်းအမြစ်များကိုသင်ခွင့်ပြုသည်။
uBlock သည် Chromium / Chrome နှင့် Firefox နှစ်ခုလုံးတွင်အလုပ်လုပ်သည်။ Ghostery နှင့်မတူသည်မှာ၎င်းကို သုံး၍ ဖြန့်ဝေသည် GPLv3 လိုင်စင်ထိုသို့များအတွက် tool ကိုအောင် အခမဲ့ဆော့ဝဲ။ Ghostery သည်အလွန်စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော်လည်း၎င်းသည်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲသာမကသာမက၎င်းသည်လည်းရှိသည် အလေးအနက်သံသယ GhostRank လုပ်ဆောင်ချက်မှတစ်ဆင့်သူသည်ပိတ်ဆို့ထားသောကြော်ငြာများနှင့်သက်ဆိုင်သောအချက်အလက်များကိုကြော်ငြာကုမ္ပဏီများသို့ရောင်းချသည်။ အဲဒီအစား၊ သင်တို့ကဲ့သို့သောအခြားအခမဲ့ရွေးချယ်စရာများကိုသင်ကြိုးစားကြည့်ပါ ခှဲခွား o uBlock။ သတိရရမည့်အချက်တစ်ချက်မှာ uBlock - ABP, AdGuard နှင့်အချို့သူများ - အသုံးပြုသူများသည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်စစ်ထုတ်ခြင်းကို Ghostery သို့မဟုတ် Disconnect နှင့်မဖြစ်နိုင်ပါ။
uBlock ကိုသုံးပြီးကတည်းကကျွန်မရဲ့အတွေ့အကြုံအရ၊ browsing speed ဟာတကယ်ကိုထူးခြားတဲ့ခုန်ပျံကျော်လွှားမှုတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ဒါ့အပြင် ၀ က်ဘ်စာမျက်နှာတွေကပိုပြီးသန့်ရှင်းသပ်ရပ်ပြီးကြည့်ရတာကျွန်တော့်ကိုအာရုံလွဲစေဖို့ပိုများတဲ့အကြောင်းအရာတွေမရှိပဲကြည့်နေတယ်။ ၎င်းသည်လုံလောက်မှုမရှိသကဲ့သို့ Adblock Plus (ABP) နှင့်မတူဘဲ uBlock သည်အရင်းအမြစ်အနည်းငယ်သာအသုံးပြုသည်။ ဤနေရာတွင်သက်သေပြရန်နှိုင်းယှဉ်ဇယားအချို့ကိုဖော်ပြထားသည်။
uBlock ဟာသွက်လက်ပြီးစွမ်းဆောင်ရည်ရှိတဲ့အတွက်အဲဒါကိုမဆိုလိုပါဘူး လျော့နည်းပိတ် ခြေထောက်တွေ။
ကျနော့်အမြင်အရဒီအချက်ကတိုတိုတုတ်တုတ်သတိပေးချက်လိုအပ်တယ်။ uBlock သည်ပုံမှန်အားဖြင့် Facebook, Twitter, Google+ စသည့်အချို့ဝစ်ဂျက်များကိုမပိတ်နိုင်ပါ။ သည်အခြား extension များပိတ်ဆို့ကြဘူး။ ၎င်းအတွက်၊ Third Party Party filter များ (uBlock တွင်ရပြီးဖြစ်သော) Anti-ThirdpartySocial (သို့) Fanboy ၏ Social Blocking List ကဲ့သို့သောအချို့ filter များကို activate လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ အတိုချုပ်အားဖြင့်သင်ရှာနေသည့်ဟန်ချက်ကိုမတွေ့မချင်းစာရင်းများနှင့်ကစားရမည်။ နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာပိုမိုရှုပ်ထွေးသောကြောင့်အဆင့်မြင့်သော options များနှင့် set ကိုလုပ်ရန်ဖြစ်သည် dynamic filter ကိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ.
Installation သည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်၊ သင်အသုံးပြုသော web browser နှင့်သက်ဆိုင်သည့် extension ကိုသာ install လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
Firefox အတွက် uBlock extension ကို download လုပ်ပါ
Chromium / Chrome အတွက် uBlock extension ကို download လုပ်ပါ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » uBlock, adBlock Plus အားအခမဲ့နှင့်စူပါပေါ့ပါးသောရွေးချယ်စရာ
31 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်ကြိုးစားမယ်။ My Firefox အလွန်နှေးကွေးနေသည်။
Firefox ရဲ့ output ကနေကျွန်တော်ဘာမှအသုံးမ ၀ င်တော့ဘူး။
uBlock Origin, Firefox ရှိ extension - https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/ublock-origin/
လမ်းဆုံလမ်းခွနှင့်ပတ်သက်သည့်နောက်ထပ်အချက်အလက်များ၊ extensions နှစ်ခုစလုံး၏ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များနှင့် Wikipedia မှ
၎င်းသည်ကောင်းမွန်ပြီးဖြစ်သော်လည်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို / etc / hosts နှင့် hosty နှင့် editing တို့နှင့်မည်သို့နှိုင်းယှဉ်မည်နည်း။ ကြော်ငြာဖရိန်များကိုဖျက်သိမ်းခြင်းမရှိသောကြောင့် ၄၀၄ အမှားကိုအမှတ်အသားပြုရန်ဤ script သည်ကောင်းသည်။
@jorgicio ငါ iframes နှင့်စာမျက်နှာပေါ်ရှိအခြားပိတ်ဆို့ထားသောကြော်ငြာများ၏သဲလွန်စများကိုရှောင်ရှားရန်သင်ပြောခဲ့သောဖြေရှင်းချက်၊ ပြုပြင်ထားသော / etc / hosts နှင့် userContent.css နှင့်အတူသုံးခဲ့သည်။ ဤကဲ့သို့သောအရာများလုပ်ဆောင်ခြင်းသည် Firefox ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုများစွာတိုးတက်စေသည်။ ဤတွင် FromLinux ၌အခြားအတော်လေးကောင်းသော option ကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည် https://blog.desdelinux.net/privoxy-adblock-list-y-adios-publicidad/ Firefox ၏စွမ်းဆောင်ချက်သည် userContent.css နှင့် / etc / hosts တို့နှင့်အလွန်နီးကပ်သည်။
သို့သော်လည်း uBlock သည်အလွန်ကောင်းသည်ကိုကျွန်ုပ်သေချာပြောနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တွင် Firefox တွင် ၂၁ ခုဖွင့်ထားသည်။ console သုံးခု၊ vim နှင့် geany open နှင့်သုံးစွဲမှု ၆၈၁ Mb ပမာဏရှိသည်။
ငါမြင်နိုင်ခဲ့တယ်, ဒါကြောင့်တန်ဖိုးထားသည်။ Opera ကဲ့သို့သောအခြားဘရောက်ဇာများအတွက်ရနိုင်သည်
ယခု u မည်သို့မည်ပုံကြည့်ရှုရန် ublock နှင့် တွဲ၍ I'll သွားမည်😀
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ဖြေတယ်: ဟုတ်တယ်၊ xD ရှိတယ်
အနည်းငယ်သာသိသော်လည်းအင်အားကြီးသောရွေးစရာမှ @usemoslinux မှအလွန်ကောင်းသည့်အလှူငွေ။ ABP ကိုအသုံးပြုခြင်းကို / etc / hosts အလွန်ကောင်းသောစာရင်းများမှတစ်ဆင့် script ၏မျက်နှာသာပေးမှုကိုရပ်တန့်ခဲ့ပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာစိတ်ပျက်စရာ whitespace ကိုဖယ်ရှားရန်အတွက်ပြုပြင်ထားသော userContent.css ကိုလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကပင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အချို့ကြော်ငြာများကိုပေါက်ကြားစေနိုင်သော်လည်း Firefox ၏စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်မှုမှာအံ့အားသင့်စရာဖြစ်သည်။
ထိုအခါ / etc / hosts အတွက် script တိုးမြှင့်စဉ်ကဤ extension ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး၎င်းကိုကြိုးစားဆုံးဖြတ်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အံ့အားသင့်စွာဖြင့်အံ့သြမိကြောင်းပြောခဲ့သည်။ ၎င်းသည် userContent.css ကဲ့သို့စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်တူညီသောကြော်ငြာကိုပိတ်ဆို့ခြင်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်၊ ပြုပြင်ရန်လည်းလွယ်ကူသည် အဖြူရောင်စာရင်းပြုခြင်းသို့မဟုတ်အသစ်သောဒြပ်စင်များထည့်သွင်းခြင်း၊
uBlocks (၂) ခုရှိတယ်ဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိထားသင့်ပါတယ်။ သူတို့မှတ်စုတွင် link တစ်ခုကမ်းလှမ်းခဲ့သည့်တစ်ခုမှာငါသုံးသောအတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မူလတည်ဆောက်သူ၏ဆက်လက်တည်ဆောက်မှုဖြစ်သည့် "မူလ" ဖြစ်ပြီးအခြားဆော့ဖ်ဝဲရေးသူထံသို့ uBlock စီမံကိန်း၏အဓိကဌာနခွဲကိုထိန်းသိမ်းရန်တာဝန်ရှိသည်။
အဲဒီမှာထူးဆန်းတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ဖက်မှာမူရင်းဖန်တီးသူကသူ့ကိုယ်ပိုင်အပ်နှင်းထားသောစီမံကိန်း၏လမ်းဆုံလမ်းခွကိုယူပြီးတိုးတက်အောင်လုပ်ထားတယ်။ အခြား developer များသည်ပြvariousနာအမျိုးမျိုးနှင့် ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားမှုများစွာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး blocker အသုံးပြုသူများနှင့်လူကြိုက်များခြင်းမရှိခဲ့ပါ။
တိုတိုပြောရရင်သူတို့ရွေးချယ်တဲ့အခါသတိထားပါ။ uBlock Origin သည်မှတ်စုတွင်အကြံပြုထားသည့်အတိုင်းအသုံးပြုသင့်သည်။ ငါကခက်ရင်းခွထွက်ပေါက်နှင့်ပြproblemsနာများမရှိဘဲထွက်လာသည့် နေ့မှစ၍ အသုံးပြုသည်။
Ghostery သည်ကျွန်ုပ်အားပေးသောခြေရာခံနှင့်ခြေရာခံခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်အပြင်ကျွန်ုပ်သည် Privacy Badger ကိုအသုံးပြုသည်။ မှတ်စုတွင်ဖော်ပြထားသောအကြောင်းပြချက်များကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။
Sergio S ကိုစာပြန်ပါ
chrome ရှိမှတ်စုတွင်မူလဖြစ်သည်၊ သို့သော် firefox သည်အခြား xD ဖြစ်သည်
၎င်းသည် Firefox ၏မူလအစဖြစ်သည်။
ရှင်းလင်းချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အခြားမှတ်ချက်တခုမှာငါပြောခဲ့သလိုဒီဆောင်းပါးရေးသားနေစဉ် ublock နှင့် ublock မူရင်းတည်ရှိမှုကိုသီးခြားစီစီမံကိန်းများအဖြစ်ကျွန်တော်မသိခဲ့ပါ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေယခုဆောင်းပါးတွင်ဖော်ပြထားသော link အားလုံးသည်မူရင်းရေးသားသူမှပံ့ပိုးပေးသော uBlock origin extension များကိုညွှန်ပြသည်။
ကျွန်ုပ်၏ကြော်ငြာအတွက်အရေးမကြီးသော်လည်းခြေရာခံခြင်းကကျွန်ုပ်ကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသည်။ သငျသညျ Disconnect နှင့်တွဲဖက်။ Privacy Badger အသုံးပြုရန်အကြံပြုလိုပါသလား? သို့မဟုတ်အခြားအရာတစ်ခုခု?
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ဟာ Privacy Badger ကိုသုံးတယ်။ ခြေရာခံမှုကိုပိတ်ဆို့ဖို့သူအလုပ်လုပ်ပုံကိုကြိုက်တယ်။
ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း Ghostery သည်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်မဟုတ်ပါ။ ကုမ္ပဏီများသို့ဒေတာများပို့နေစဉ်၎င်းသည်ပိတ်ဆို့ခြင်းများစွာရှိသည်။
Disconnect ၏အမှု၌၎င်းကိုခဏအသုံးပြုပြီး Ghostery နှင့်ဆင်တူသည်။ သင့်တွင်၎င်းကိုပိတ်ဆို့ပြီးမွမ်းမံထားသောလမ်းကြောင်းများစာရင်းရှိသည်။ သူက open source လားမဟုတ်မသေချာဘူး၊ ဒါပေမယ့်သူကငါ့ကိုမအောင်မြင်စေတဲ့အပြင် Ghostery ပိုကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်လို့ငါမသုံးတော့ဘူး။
ယခုတွင်ကျွန်ုပ်သည် Open source တစ်ခုခုကိုလိုချင်သောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်သည် Privacy Badger ကိုရှာ။ တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ငါကယခင်2နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအလုပ်ဖြစ်တယ်ကြောင်းရှင်းလင်း။ ပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းသည်ပိတ်ဆို့ခြင်းမရှိသော်လည်းသင်အသုံးပြုသည့်အခါ၎င်းသည်မည်သည့်လမ်းကြောင်းများပိတ်ဆို့ခြင်းသို့မဟုတ်ပိတ်ဆို့ခြင်းများကိုပြုလုပ်သည်ကိုလေ့လာခြင်းဖြစ်သည်။
Open Source အားလုံး (လုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်များအတွက်သူတို့နောက်ကွယ်မှကစားမည်မဟုတ်) ကိုသင်ပိုမိုစိတ်ဝင်စားပါက Privacy Badger သည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သင့်သည်။ ပြီးတော့အဲဒါကိုတစ်ယောက်တည်းသုံးပါ၊ Disconnect နှင့် Ghostery အတူတူလုပ်ပါ။
အမြဲတမ်းအလုပ်လုပ်တဲ့ post နဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပါဘလို။
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ Firefox စွမ်းဆောင်ရည်ကိုနှစ်ကြိမ်တိုးတက်စေသည်။
ထို့အပြင် winXP နှင့် linux ရှိ host file သည်ဆင်တူသည်၊ နီးပါးအတူတူဖြစ်သည်
Windows နှင့် Linux အတွက်ညွှန်ကြားချက်များဖြင့်၎င်းတို့သည်မလိုအပ်သော်လည်းသံသယဖြစ်စရာမလိုပါ။
Paulo Zuniga ဟုသူကပြောသည်
သတင်းအချက်အလက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကိုယ့် adblock ကို deflated နှင့်ယခုငါဒီအံ့သြစရာရှိသည်။ Safari မှာ 100% အလုပ်လုပ်တယ်။
wow, ဒီ add-on ကိုအကြံပြုဘို့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်ကွန်ပျူတာတွေထဲမှာ ABE ကိုသုံးနေပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် Firefox Dev ရဲ့ multi-process option ကထွက်လာတော့သူကအလုပ်မလုပ်တော့တော့ multi-process ကိုမသုံးတော့တာပေါ့။ ဒါပေမယ့် but ကောင်းကောင်းအလုပ် seems ပုံရသည်🙂
ငါ Adblock Plus ကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးပြုခဲ့သည်။
uBlock Origin ကိုကျွန်ုပ် install လုပ်ပြီးပါပြီ၊ အထူးသဖြင့်အသက်ကြီးနေပြီဖြစ်သောကျွန်ုပ်၏ laptop ပေါ်တွင်အနည်းငယ်တိုးတက်လာသည်။ ညနေစာစားပွဲမှာကျွန်တော်အများကြီးသတိမထားမိပါဘူး
ငါ၌ရှိသောအရာသည်ဆင်တူသောနာမည်များစွာနှင့်တူသော uBlock, uBlock Origin, µBlock ...
uBlock Origin ကိုကျွန်ုပ်ထည့်ပြီးပါပြီ၊ ဒါပေမယ့်အမှန်တရားကတော့ဘယ်တပ်ဆင်ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်မသိခဲ့ပါဘူး။
Sergio S က uBlock Origin ကိုအကြံပြုသောမှတ်ချက်များကိုကျွန်ုပ်ဖတ်ပြီးပါပြီ။ သူတို့ µBlock နှင့် UBlock တို့ကိုအကြံပြုသည့်နေရာများကိုလည်းဖတ်ပြီးဖြစ်သည်။ ရှုပ်ထွေးသောရည်ညွှန်းချက်များသည်အကြောင်းအရာတစ်ခုအကြောင်းပြောခြင်းနှင့်အခြားတစ်ခုသို့လင့်ခ်များတင်ခြင်းနှင့်အတူပင်၊ uBlock နှင့် Firefox နှင့် Chrome အတွက် uBlock Origin
Señor Paquito အားပြန်ပြောပါ
အမှန်တရားကတော့ဒီဆောင်းပါးရေးသားစဉ်မှာ uBlock နဲ့ uBlock ရဲ့မူလတည်ရှိမှုကိုငါမသိခဲ့ဘူး။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တသမတ်တည်းဖြစ်ဖို့အတွက်ငါ link တွေပြင်လိုက်ရုံနဲ့သူတို့အားလုံး uBlock ရဲ့ဇာစ်မြစ်ကိုညွှန်ပြနေတယ်။
၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်လှသည်။ ကျွန်ုပ်ကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်သည်လုပ်ဆောင်ချက်များစွာမလိုအပ်ဘဲ Bluehell ကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။
ublock ကို Firefox တွင်ရရှိနိုင်ကြောင်းငါသိသောကြောင့်ငါသုံးမည်။ ဒါဟာသိရန်သတင်းကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ စကားမစပ်ကျွန်တော် ABE ကိုပျံသန်းဖို့ပို့လိုက်တာကကျွန်တော့်ခွင့်ပြုချက်မရဘဲအရာတစ်ခုခုကိုတပ်ဆင်လိုက်တာကြောင့်စိတ်ရှုပ်ထွေးစရာကောင်းတဲ့အမူအကျင့်ကိုပေးနေတာကြောင့်ပါ။ ထိုအခါငါက uu ပိုကောင်းသည်ဟုထင်သောကြောင့် install လုပ်
ကောင်းပြီ၊ မှတ်စုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ငါတကယ်ကြိုက်တယ်🙂
အကောင်းဆုံးစီစဉ်ဖွဲ့စည်းမှုကိုရှင်းပြသောပို့စ်သည်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်။ သို့အတွက်ကြောင့်၎င်းတိုးချဲ့မှုသည် Adblock နှင့် Ghostery ၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအားလုံးရှိသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်သည် Blur ဟုခေါ်သော DoNotTrackMe ကိုမည်သူမဆိုသိပြီးလား၊ ၎င်းသည်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုရှိပါသလားဟုမေးလိုသည်။
ငါက Xubuntu နဲ့အတူ memory 1 Mb သာရှိတဲ့ကွန်ပျူတာတစ်လုံးမှာ Adbloc အစားထိုးအနေနဲ့စမ်းသပ်တာပေါ့။ ငါ Firefox ကိုသုံးတယ်၊ တခါတလေအရမ်းနှေးသွားပြီးပြတ်တောက်သွားတတ်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ခေတ်မှာအချို့သောဝဘ်စာမျက်နှာများက scripts များစွာကိုထည့် ထား၍ သွားလာရန်လမ်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကြော်ငြာပိတ်ဆို့မှုများရှိနေခြင်းသည်မည်မျှကောင်းသည်၊ တခါတရံတွင်ကြော်ငြာနှင့်အကြောင်းအရာမပါရှိ only
TRIANA ၏ ER KUNFÚ ဟုသူကပြောသည်
အနည်းဆုံး yahoo mail ဖြင့်ကြော်ငြာအားလုံးပိတ်ဆို့ခြင်းမရှိပါ။ သင့်တွင် yahoo mail ရှိပါကသင်၏ inbox ထဲသို့ ၀ င်ပြီးပထမဆုံးစာလက်ခံရရှိသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်အခါအားလျော်စွာကြော်ငြာပေါ်လာသည့် box တစ်ခုရှိနေသည်ကိုသတိပြုပါ။ ငါစစ်ထုတ်မှုတွေကိုထောင်ပေါင်းများစွာနဲ့ပြင်ဆင်ပြီးပြီ။ ပျော်ရွှင်တဲ့ကြော်ငြာတွေပါတဲ့အကွက်ကအချိန်နဲ့အမျှဆက်လက်ပေါ်နေတယ်၊ ​​အနည်းဆုံးငါဘယ်လိုဖယ်ရှားရမှန်းမသိဘူး။
ER KUNFÚ DE TRIANA အားစာပြန်ပါ
ublock သည် chroium LMDE betsy တွင်အလွန်ကောင်းမွန်သည်
Alfredo Bohorquez ဟုသူကပြောသည်
ငါပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပြproblemနာတစ်ခုအကြောင်းပြောပြတယ်။ ငါကြော်ငြာပိတ်ဆို့ခြင်း tools များ, လက်ရှိပါပြီ Adblockအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှသူတို့ဟာအချိန်နည်းလာတာနဲ့အမျှအသုံးနည်းလာတာနဲ့အမျှကျွန်တော့်အတွက်တော့ထူးဆန်းနေတယ်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်၊ အကြောင်းအရာများကိုပိတ်ဆို့ခြင်းတွင်၎င်းတို့သည်ပြီးပြည့်စုံသည်၊ သို့သော်သင့်တွင် blocker ရှိသည်၊ သို့မဟုတ်သင်ကြော်ငြာကိုစားသည်ဖြစ်စေ၊ ထိုစာမျက်နှာကိုပိတ်ထားခြင်းဖြင့်စာမျက်နှာကိုပြန်ဖွင့်ရန်သင့်အားအတင်းအကျပ်စေခိုင်းသည့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များမှာပိုမိုကောင်းမွန်လာသည်။ ဒါကြောင့်သင် blocker ကို detect ။ ငါကြော်ငြာကိုပိတ်ဆို့ရန်ယနေ့အမှန်တကယ်ထိရောက်သော tool ကိုသိလျှင်ငါမေးချင်တယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
Remix Mini: Android ကို PC ထဲသို့အတိအကျရောက်စေဖို့ရည်ရွယ်သည့်စီမံကိန်း
GIMP ကို ​​Photoshop ၏ပုံပန်းသဏ္ဌာန်ပေးပါ